I-chalet epholileyo enombono ophefumlayo eVillars!
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSteffen
I-chalet yomntu eyonwabisayo, inoxolo kakhulu, inegadi entle, iithafa kunye neebhalkhoni ezijongene noMzantsi. Inika umbono omangalisayo weSwitzerland Alps. Beka kumoya wendabuko ngoncedo lweengcibi zendawo, le chalet - ephuculwe kwiminyaka - yinto yokwenene yobugcisa, ekhethekileyo yohlobo lwayo. Ngezixhobo zayo ezininzi ezihlanganisiweyo eziqingqwe ngomthi, ifenitshala yayo ekhethekileyo, idibanisa intuthuzelo yanamhlanje kunye nomtsalane wexesha elidlulileyo, iya kuhenda zombini iintsapho kunye nabathandi bobunyani kunye nokuzola.
Le chalet yomntu ihlelwe ngokwamanqanaba amathathu:
Kumgangatho wokuqala: Igumbi lokulala elibalaseleyo elinembono entle yeSwiss Alps, igumbi elahlukileyo elinebhedi enye, iWC epholileyo.
Kumgangatho ophantsi: igumbi elinebhedi enye yokukhupha (kumntu omnye okanye ababini) kunye nokufikelela kwi-balcony ukujonga ngokuthe ngqo iintaba, igumbi lokuhlala elinefanitshala yalo ekhethekileyo kunye nokufikelela kwi-terrace, igumbi lokuhlambela (ibhafu. /ishawa), umatshini wokuhlamba, iWC eyahlukileyo, ikhitshi elixhotyiswe (enesitya sokuhlamba izitya phakathi kwezinye izinto).
Kwinqanaba elisezantsi: igumbi elineebhedi ezintathu ezingatshatanga (kubandakanywa neebhedi ezimbini zebhedi) kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace kunye negadi, i-WC, umatshini wokuhlamba, ishawari encinci eyahlukileyo, ikhitshi encinci (ifriji, iihob ezimbini, iindawo zokugcina, ukutya okuyimfuneko), igumbi lokuhlala elihle lamaplanga elinendawo yokutyela. Ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace kunye negadi.
I-chalet ixhotyiswe ngokufudumeza okuphakathi, i-TV eneenkqubo ezininzi ngeelwimi ezininzi, i-DVD player kunye nokukhethwa kweeDVD, i-wifi, iincwadi kunye namaxwebhu malunga nemisebenzi eyenziwa kummandla.
Ujonge ngasemazantsi, igadi igcina imfihlo yabahlali bayo ngenxa yezityalo ezishinyeneyo ezidala iindawo ezinkulu ezinomthunzi omnandi. Ixhotyiswe ngokugqibeleleyo ngefanitshala entsha yegadi, i-BBQ kunye nemidlalo yebhola.
Iiterras ezimbini ezineendawo zokuhlala ziyafumaneka ngakumbi.
I-chalet ibekwe e-Arveyes, kwindawo ekufutshane ne-Villars (imizuzu eyi-10 ngeenyawo). I-chalet ibekwe kwindawo ezolileyo apho iindwendwe zinokuphumla kwaye zonwabe. Zonke iinkonzo zikufuphi (iofisi yabakhenkethi, iindawo zokutyela, iivenkile zokubhaka, iikhemesti, iivenkile ezinkulu, njl.njl.) kunye nazo zonke iindawo ezinomtsalane zabakhenkethi kwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide (uloliwe omncinci kunye nemoto yekhebula enikezela ukufikelela kwindawo yeski yaseBretayes ngokuqhagamshelwa kwiDiablerets, a Iqula elitsha lokuqubha langaphakathi nangaphandle, iinkundla zentenetya, ibala legalufa elinemingxuma eli-18, irenki yomkhenkce, njl.njl.).
Ndiya kwenza konke okusemandleni am ukuba kulo naluphi na uncedo xa kukho imfuneko! Ndihlala malunga neyure enye ukusuka kule ndawo.
Iilwimi: Dansk, English, Français, Deutsch, Italiano
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Villars-sur-Ollon